बिहिबार, अशोज ७, २०७८ १०:१५
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। अमेरिका भ्रमणका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुधबार विमानमा त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। तर उनको विमान अफगानिस्तानको आकाश भएर गएन। सुरक्षाका कारण यस्तो निर्णय गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
अफगानिस्तान क’ब्जा गरेपछि तालिबानले गत अगस्ट १६ देखि आफ्नो हवाई मार्ग (आकाश) मा व्यावसायिक उडान प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि भारत सरकारले आफ्ना हवाई सेवा कम्पनीहरूलाई अफगानिस्तानको हवाई मार्ग प्रयोग नगर्न सूचना जारी गरेको थियो।
चीनको घोषणा विदेशमा अब कोइला ऊर्जा केन्द्र नबनाउने
भारतीय सेनाको ३९ सदस्यीय टोली अकस्मात नेपाल आउँदै, फेरि के हुदैँछ नयाँ ?
राजनीतिमा उथलपुथलको संकेतः सेनालाई सत्ता समाल्न अपिल गर्दै जनताहरु सडकमा !
चीनको रणनीति भारतविरुद्ध दबाब बढाउने, भुटानसँगको सीमा सम्झौताले भारत झस्कियो